Odayaal laga keenay Gedo oo Buux dhafiyay Hotelada Muqdisho kuna heeb ah Farmaajo si loo dhiso Jubbland uu Madaxweyne ka yahay C/rashiid Janan. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Odayaal laga keenay Gedo oo Buux dhafiyay Hotelada Muqdisho kuna heeb ah...
Odayaal laga keenay Gedo oo Buux dhafiyay Hotelada Muqdisho kuna heeb ah Farmaajo si loo dhiso Jubbland uu Madaxweyne ka yahay C/rashiid Janan.
Xili maamulka Jubbland uu kala qeybsan yahay ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho imaanayay Odayaal ka soo jeeda Jubland gaar ahaan Beesha uu ka dhashay Farmaajo ee Mareexaan, kuwaas oo diyaarado looga soo qaaday Gobolka Gedo.
Wararka ayaa sheegaya in odayaashan ay la kulmeen wasiirka arrimaha gudaha Jeneral Mukhtaar Xuseen Afrax, si loo dhiso Maamul kale oo ka madax banana axmed Madoobe oo uu Madaxweyne ka yahay C/rashiid Janan.
Mas’uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, oo uu ku jiro wasiirka ayaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ka billaabay kulamo loo qabanayo odayaashan oo badankood ku beel ah madaxweyne Farmaajo.
Kulan dhacay Talaadadii ayaa qoraal ay wasaaradda kasoo saartay lagu yiri “Odayaal dhaqameedka beelaha dagga Julabaland iyo siyaasiinta ka soo jeeda maamlkaas ayaa u gudbiyay Wasiirka Wasaaradda cabashooyin ku aaddan sida ay ku dhisantahay Dowlad Goboleedka Jubaland.”
“Waxaa ay caddeeyeeyn in aysan ku qanacsaneyn guud ahaan Maamulka Jubaland. Isla markaana ay daneynayaan maamul lagu dhiso si wada ogal ah, damaanad qaadi kara Nabadgalyadooda iyo isku haynta wada jirkooda iyo horumarkooda, shacabka ku dhaqan maamulka Jubaland.”
Sidoo kale Odayaashaan oo la dejiyay hoteelo ayaa loo sheegay in ay ka qeyb geli doonaan kulamo kale oo looga tashanayo dhismaha Jubaland cusub, oo loo wado in uu Madaxweyne ka Noqdo C/rashiid janan.
Previous articleMaxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo xukuno kala duwan ku riday Rag iyo dumar lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen Ururka Al-Shabaab..
Next articleWakiilada Beesha Caala.ka ee Arimaha Soomaliya oo Go aan adag oo ka dhan ah Madaxda Soomalida qaadaneysa
Guddiga Doorashooyinka Somaliland olo digniin ka soo saaray howlaha doorashooyinka...
Guddiga Doorashooyinka Somaliland ayaa digniin ka soo saaray howlaha doorashooyinka Golaha Wakiilada iyo degaanka Soomaliland, xilli Maalinta Berito ah ay bilaaban doonaan Ololaha...
Xarunta wasaaradda Qorsheynta Galmudug ee Dhuusamareeb oo a la dhagax dhigay
Zaki Axmed Faarax & Ifraax Maxamuud Cali oo hambalyo hawada loo...
Madaxweyne Farmaajo iyo Xildhibaano Mucaaradka ku ah oo ka soo dagay...
Waxa Qorey Musharax Madaxweyne Hassan Ali Khaire
Dhulka Soomaalidu Degto iyo Dadka af Soomaaliga ku hadla !Waxa Qoray:Wasiir...
Mohamed Abdullahi Mohamed - February 10, 2021 0